Adenoiditis buru ibu ma na-ala ala na ọgwụgwọ ya
Achọpụtara nwa gị na adenoiditis na ị nwere ọtụtụ ajụjụ. Ka anyi gbalịa ịghọta. Ịmara na adenoids maka ọtụtụ ndị nne na nna, ọ dị mwute ikwu, ọ naghị ebido na akwụkwọ na mmepụta ahụ. Ọnọdụ ahụ ike nke ụmụ ha na-amanye ha ka ha tinye aka na ENT, bụ ndị na-eduzi "ọzụzụ" megide obere akwụkwọ a na nasopharynx. Ebe ọ bụ na agụmakwụkwọ a (karịchaa, ígwè) siri ike ịhụ, mama m na papa m bụ ụdị echiche ọ bụla. Adenoiditis buru ibu ma na-ala ala na ọgwụgwọ ya - na isiokwu anyị.
Adenoids adịghị mkpa ọ bụla maka ahụ nwata ahụ
Adenoids (ma ọ bụ pharyngeal tonsil) bụ ngwakọta nke anụ lymphoid. Ọgaranya na lymphocytes, gland a na-echekwa akụkụ akụkụ iku ume nke elu. Ebe nke tonsil pharyngeal dị otú ahụ na mgbe a na-etinye ya n'ahụ, microparticles, ájá, nkwụsị nke nje bacteria na nje "jikọọ" na ya na ichere. Ntucha a dị mkpa karịsịa maka ndị na-eto eto bụ ndị na-amalite ikwu okwu na ụwa ka ukwuu. N'ihi adenoids, ikuku dị ọcha na-abanye na bronchi na ngụgụ. Ngwurugwu pharyngeal bụ, n'eziokwu, akụkụ ahụ mgbochi nke na-ekere òkè n'iwepụta mgbochi obodo. Nke a na-amalite ịmalite ịrụ ọrụ na ngwangwa nke antigen (protein ndị ọzọ) ma na-eme nzaghachi nke a na-eche maka otu onye ọrụ na-emepụta ihe. Akwara pharyngeal amalite ịrụ ọrụ site na ọnwa atọ ruo ọnwa isii, na-arụ ọrụ kachasị nke ọrụ abụọ ruo afọ ise.
Inflamed adenoids anaghị emezu ọrụ ha
Uru nke adenoids na-adịgide ruo mgbe mbufụt na-amalite. Mgbe ala ahụ dị mma, nje bacteria na nje dị na anụ ahụ na ndị agha (leukocytes, lymphocytes), wee weghaara ya ma mee ka ọ ghara ịdị njọ, slough na epithelium dị elu. Otú ọ dị, n'ihi ọnọdụ ndị dị na amygdala (mpịakọta) na obere nrọ nke akpụkpọ ahụ mucous, nje bacteria nwere ike ịnọgide ruo ogologo oge, mgbe ahụ adenoid anụ ahụ na-aghọ akpa nke ọrịa ọnyà. Ndị na-arịa ọrịa na-eme ka ahụ gland, nke na-eduba na mmụba ya, ma arụ ọrụ ya. Dense, nnukwu adenoids mechie ụzọ ọpụpụ si na ndoji nke ihe ahụ, na nwa nwere nsogbu ụfọdụ na iku ume. The karapuz na-akpọlite ​​na-anabataghi, na-eme mkpesa nke isi ọwụwa. N'ihi nke a, a na-emebi usoro nke mmegharị na mmụba site na nwa nke nkà ọhụrụ.
Adenoides eto na onwe ha
Otu n'ime ihe ndị na-akpatakarị adenoiditis bụ ọrịa nje. Ọrịa na-emekarị ka ọrịa na-arụ ọrụ na-enweghị ọrụ. A kwenyere na ARI atọ ma ọ bụ anọ, nke a na-ebufe n'oge dị mkpirikpi, nwere ike ịkpalite mmụba dị elu nke ya. A na - akpọ pharyngeal tonsil "swollen" na - akpọ adenoids. Ogwu nke adenoid na-epulite nwere ike ịbụ ọrịa nwatakịrị (dịka ọmụmaatụ, ọrịa na-acha uhie uhie). Ihe ọzọ kpatara - usoro nrịanrịa na-adịghị ala ala n'ime ahụ ahụ. Adenoid ahịhịa bụ ndị enyi nke ụmụ na-ata ahụhụ site na diathesis. Ihe dị mkpa maka ibu nke adenoids bụ ọnọdụ ndụ nwa ahụ, dịka ọmụmaatụ, ibi na ụlọ na-agba mmiri, ebe dị ala ma dị jụụ.
Adenoids nwere ike gwọọ
Adenoid vegetation, dị ka a na-achị, nye na ọgwụgwọ. Usoro ọgwụgwọ dị irè na-adabere n'ụzọ bụ isi n'ogologo mmụba ha. Ọ bụrụ na ụba gland bụ obere (m ogo), mgbe ahụ, dọkịta ga-enye ndụmọdụ ịmalite ọgwụgwọ na ndị na-agbanwe agbanwe, nke ahụ bụ usoro ndị na-adịghị arụ ọrụ. Isi ọgwụgwọ dị iche iche ga-abụ nhazigharị nke nnukwu ọrịa na-adịghị ala ala nke ọrịa. Iji mee nke a, tinye ndị na-ahụ maka nje bacteria (na ụmụ irighiri mmiri, ngwọta), na-ehichapu oghere ntụrụndụ na ngwọta saline. Ọnọdụ dị mkpa maka ọgwụgwọ nke ọma bụ iwusi ike nke nkwonkwo n'ozuzu ha, n'ihi na ọnyá respiratory na-esote ọzọ na-akpali mkpalite nke adenoids. Mgbe ọrịa ahụ gasịrị, a ghaghị inye nwatakịrị oge iji weghachite ngwa lymphoid ya. Mgbe ị na-eje ije, zere ebe ndị juru ebe niile ka ị ghara "jide" nje ọhụrụ.
Na nwatakịrị ahụ adịghị arịa ọrịa, ọ dị mma ma na-arụ ọrụ mgbe niile
Antihistamines maka ụmụaka
Nri oriri kwesịrị ekwesị nke nwatakịrị ruo otu afọ
Ntị na-anụ ihe na ụmụaka na usoro nke mgbazi ha
Otu esi esi kwado okwu
Ihe ngosi egwuregwu bara uru na nwa
Ihe dị mma na ihe ọjọọ: isi ihe nke agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ ọta akara
Nwanne ya nwanyị ọ bụ onyinye?
Ihe bara uru nke oats na Hercules porridge
Julienne si na-eri nri
Nti na tomato
Achịcha mmiri ara ehi
Ọkachamara ọkachamara maka ọgwụgwọ ntutu
Olee otua esi tufuo ahuhu?
Cedar phytoel maka ụkọ ọnwụ
Christmas Katọlik 2015: mgbe a na-eme ememme Krismas Katọlik, ụbọchị
Ụkwụ ụkwụ maka iwepụ ike ọgwụgwụ
Pizza na chicory na pesto ihendori
Kedu otu esi ahọrọ ntutu ntutu maka ntutu?
Mfe Fiesta: nri akwukwo nri pizza na tomato na cheese
Andrei Arshavin nwere alụmdi na nwunye Alisa Kazmina, foto
Stas Pieha ama adaha ye n̄wan esie